I-Fondu La Llosa - Ikhaya Leholide eGijón - I-Airbnb
I-Fondu La Llosa - Ikhaya Leholide eGijón
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguVíctor Manuel
UVíctor Manuel unezimvo eziyi-544 zezinye iindawo.
Yindlu yeholide enamagumbi okulala ayi-5 anamagumbi okuhlambela awo ngaphakathi egumbini lokulala. Amagumbi akumgangatho ophezulu, nangona kukho iindawo eziyi-3 ezihonjiswe kakuhle ezantsi, iholo eyahlukileyo: indawo yokuphumla enkulu, apho unokuzonwabisa khona, utye, udanise ukuya kutsho kubantu abayi-20 ngaphandle kokuxinwa, kukho indawo yokubasa umlilo neendawo ezinkulu. Ikhitshi elikhulu elinezixhobo zombane nezixhobo, kunye negumbi lesithathu lokufunda-i-TV apho kukho iincwadi zokufunda, iisofa, njl ...
Indawo evulekileyo yeholide embindini wonxweme oluhlaza. Ime kwindlela ye-N-632 ukuphakama kwe "Puente Arroes", phambi kwe-Peón detour. Yindlu yeholide enamagumbi okulala ayi-5 anamagumbi okuhlambela angaphakathi egumbini lokulala (nayo igqityiwe, ineshawa ne-bidet), kunye nelinye igumbi lokuhlambela ngaphandle kwalawo magumbi. Amagumbi akumgangatho ophezulu, nangona kukho iindawo eziyi-3 ezihonjiswe kakuhle ezantsi, iholo eyahlukileyo: indawo yokuphumla enkulu, apho unokuzonwabisa khona, utye, udanise ukuya kutsho kubantu abayi-20 ngaphandle kokuxinwa, kukho indawo yokubasa umlilo neendawo ezinkulu. Ikhitshi elikhulu elinezixhobo zombane nezixhobo, kunye negumbi lesithathu lokufunda-i-TV apho kukho iincwadi zokufunda, iisofa, njl ...
Indawo ethe cwaka, kufuphi nomlambo, kufuphi nolwandle kunye nolwandle lwaseSpeyin, le yindawo ekufutshane neGijón, kufuphi namalwandle anika umdla nezintle kwaye akude nendawo yabakhenkethi eCangas de Onís-Cabrales-Covadonga.
Umbuki zindwendwe ngu- Víctor Manuel
Emva kwesicelo, iindwendwe ziza kunikwa inkcazelo eyongezelelekileyo ngokuthanda kwazo.
Inombolo yomthetho: VV593AS
Iilwimi: العربية, বাংলা, 中文 (简体), Čeština, Dansk, Nederlands, English, Français, Deutsch, Ελληνικά, עברית, हिन्दी, Italiano, 日本語, 한국어, Norsk, Polski, Português, Русский, Español, Svenska, ภาษาไทย, Türkçe, Українська